Fandaharanasa Prosperer Analamanga : hampivoatra ny famoronana ny Voatra 2016 | NewsMada
Fandaharanasa Prosperer Analamanga : hampivoatra ny famoronana ny Voatra 2016
Par Taratra sur 03/09/2016
Tsy tanteraka ny fampandrosoana raha tsy miditra ao anatin’ny sehatra ara-dalàna ny mpamokatra sy ny tantsaha. Manohana ny fitodihana amin’ny tsena sy ny lalam-barotra ny fandaharanasa Prosperer.
Mampifandray ny mpamokatra sy ny mpandraharaha ny fandaharanasa Prosperer. Anisan’ny paikady hanatanterahana izany ny hetsika ho an’ny famoronana Voatra andiany fahefatra 2016. Hatao etsy amin’ny tokontany malalaky ny lapan’ny Tanàna Analakely, ny 8 hatramin’ny 10 septambra ho avy izao, ahitana mpandray anjara maherin’ny 60.
Nambaran’ny mpandrindram-paritry ny Prosperer Analamanga, Andriamihamintsoa Rasamoely, fa tanjona ny hampitomboana ny fidiram-bolan’ny mpamokatra sy ny tantsaha, sy ny ho lasa mpandraharaha matihanina madinika.
Ho hita amin’ity Voatra 2016 ity avokoa ny lalam-pihariana (salohy) tohanan’ny Prosperer. Toy ny sehatry ny legioma sy ny voankazo, ny asa tanana sy ny taozavatra, ny tantely, ny ilomenaka, ny volontsangana, sns. Anisan’ny homena lanja manokana ny lalam-pihariana volontsangana amin’ity andiany fahefatra ity.
Fifaninanana ho an’ny mpandray anjara
Amin’ny maha hetsika natokana ho an’ny famoronana azy, hisy fifaninanana ho an’ny orinasa na mpandraharaha madinika sy tena madinika. Hahazo fiofanana hanamafisana ny famoronana amin’ny lafiny famokarana, ny famonosan’entana, ireo mpandray anjara mendrika voasivana. Hankasitrahana koa ny tranoheva mendrika indrindra.
Hisy famelabelaran-kevitra mifantoka amin’ny lohahevitra samihafa mandritra ny Voatra 2016. Hihaona mivantana koa ny mpamokatra sy ny mpandraharaha, ny mpisehatra samihafa amin’ny lalam-pihariana toy ny mpanamboatra fitaovam-pamokarana, ny sampandraharaha ara-bola madinika (IMF) sy ny banky, ny mpanodim-bokatra, ny mpamokatra na mpamatsy akoram-pamokarana (masomboly, zezika, fanafody, ….), sy ny maro hafa.
Anisan’ny miara-miombon’antoka amin’ny Prosperer Analamanga ny Antenimieran’ny varotra sy ny indostria Antananarivo (CCIA).